Ceeymiska bulshada ee guud | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Barashada bulshada / Buuga "Om Sverige" / In qofka isku filnaado iyo horumar laga gaaro Iswiidhan / Ceeymiska bulshada ee guud
Waalidiinta dhamaantood waxeey xaq uu lee yihiin lacagta caruurta. Waa lacag dhan 1250 karoon oo bil kasto loogu tala galay canuga ilaa uu ka gaaraayo 16 sano. Haddii aad lee dahay hal canug ka badan, lacag dheeraad ah ayaa la socoto lacagta caruurta. Waxaa lagu magacaabaa lacagta caruurta ee dheeraadka ah. Haddii aad isla wadaagtaan qaadidda mas'uuliyadda sharciyeed ee cunuga adiga iyo waalidka kale markaas waa qeybsaneysiin lacagta taageerada carruurta.